कहिलेबाट रोकिएला कोरोनाको महामारी ? वैज्ञानिकले गरे फेरी यस्तो दाबी - Mitho Khabar
April 5, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कहिलेबाट रोकिएला कोरोनाको महामारी ? वैज्ञानिकले गरे फेरी यस्तो दाबी
एजेन्सी । चीनको वुहानबाट सुरु भइ विश्वका २०३ देशमा तहल्का मच्चाईरहेको प्राणघातक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को बैज्ञानिकहरुले फेरी एउटा नयाँ दावी फरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ९६७ को मृत्यु भएको छ भने ७९ हजार ३०३ संक्रमित फेला परेका छन्।
विश्वभर कोभिड–१९ का कारण संक्रमित हुनेको संख्या १० लाख नाघेको छ । हालसम्म संक्रमितको संख्या १० लाख १४ हजार ४ सय ९९ पुगेको छ। त्यस्तै, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५५ हजार नाघेको छ। हालसम्म ५३ हजार १ सय ५९ को मृत्यु भइसकेको छ । हालसम्म २ लाख १२ हजार १८ निको भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी तिब्र गतिमा फैलिरहेका बेला चीनका वैज्ञानिकले अबको ४ हप्तामा कोरोना भाइरसको महामारी कम हुने दाबी गरेका छन्।
उनले कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमणमा कमी आउने बताएका हुन्। उनले चीनमा अब कोरोान भाइरसको संक्रमण नदोहोरिने पनि दाबी गरेका छन्। यो भविष्यवाणी डाक्टर झोन्ग न्यानश्यानले गरेका हुन्।
उनी कोरोान भाइरस नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले तैनाथ गरेको मुख्य टिम प्रमुख हुन्। ८३ वर्षीया डाक्टर झोन्गले भनेका छन्, अब चीनमा कोरोना भाइरसको दोस्रो हमला हुँदैन्।
किनकी हाम्रो यसले मोनिटरिङ सिस्टमलाई निकै मजबुद गराएको छ। डाक्टर झोन्गले दिएको उक्त अन्तवार्ताका आधारमा डेलिमेलले समाचार प्रकाशन गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि कडा कदम उठाएका कारण आउँदो ४ हप्तामा नयाँ संक्रमित देखिन कम हुने उनको दाबी छ।